AOL စနစ်စက်ကိရိယာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Aol စနစ်သတင်းအချက်အလက် - ပြီးပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
Aol စနစ်သတင်းအချက်အလက် - ပြီးပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
စနစ်စက်ပြင်iolo မှ software သည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုလုံခြုံစိတ်ချစေခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်စနစ်ပိုမြန် run နှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာနိုင်ပါတယ်။စနစ်စက်ပြင်ဆော့ဖ်ဝဲ - ဆက်သွယ်မှုဆက်တင်များကိုအကောင်းဆုံးဖြင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်သည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ Muradi Tutorial ရဲ့ YouTube channel ကိုလာပါ။ ငါ AOL အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းသွားသောအမှားပြင်ဆင်ချက်ကိုသင်ဘယ်လိုပြရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ ၀ င်သည့် POP သို့မဟုတ် IMAP ဆာဗာသို့မဟုတ်အလားတူအလားတူ Outlook အမှားများကိုကျွန်ုပ်တို့မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ သင် Outlook သို့ Gmail ထည့်လိုပါက Muradi Tutorial ၏ YouTube channel သို့သွားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါးများကို နှိပ်၍ Gmail အတွက် Outlook အမှားဆောင်းပါးကိုရှာပါ။ သင်သည် Yahoo အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုပါက Muradi tutorial youtube channel သို့ပြန်သွားပါ။ ဆောင်းပါးများကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ Outlook မှတစ်ဆင့်ဆောင်းပါးကိုရှာပါ။ pop.aol.com ရှိ pop account အကောင့်ပေါ်ရှိ pop account setting တွင် AOL အီးမေးလ်ကိုဤတွင် ၉၉၅ ချရေးပါ။ ဤဆာဗာသည်အထွက်မေးလ်ဆာဗာတွင်စာဝှက်ထားသောဆက်သွယ်မှု SSL (သို့) TLS လိုအပ်သည်ကိုကလစ်လုပ်ပါ။ rsm downsmtp.aol.com တွင်ဆိပ်ကမ်းပေါ်မှ ၄၆၅ ကိုရွေးချယ်ပါ။ မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ဖြည့်ကြောင်းကိုမြင်သောအခါ SSL သို့မဟုတ် TLS သည်သင်၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် AOL စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုပြီးဤ pop-up စာကိုတွေ့သောအခါ Connect ကိုနှိပ်ပါ။ ယခု AOL Email, AOL Email သို့သွားပါ၊ သင်၏ညာဘက်ထောင့်ရှိအိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ Check my account ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်းပုံကို နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဒီနေရာတွင် Account Security ကိုနှိပ်ပါ Account Security ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေး။ Next ကိုနှိပ်ပါသင်၏စကားဝှက်ကိုနှိပ်ပါ Next ကိုနှိပ်ပါ။ ဤစာမျက်နှာရှိ Account Security ကိုရောက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်း scroll လုပ်ပါ။ သင်၏ app ကိုသင်ရွေးချယ်သောနေရာဖြစ်သည်။ Outlook Desktop ကိုရွေးပြီး Generate ကိုနှိပ်ပါ။ ဤသည်မှာသင်ကူးယူလိုက်သောစကားဝှက်ဖြစ်သည်။ Outlook သို့သွားပြီး POP Account Settings ရှိဤစာမျက်နှာရှိ Account Account Settings ကိုနှိပ်ပါ။ အချက်အလက်အားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်
B. ၀ င်နေသောဆာဗာ port 995 ကိုစစ်ဆေးပြီးအထွက်အီးမေးလ်များလည်းအဆင်ပြေပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းလည်းအဆင်ပြေပါသည်။ SSL / TLS ကိုရွေးချယ်ထားတယ်အဆင်ပြေပါသည်။ နောက်လာမည့်ကလစ်ကိုနှိပ်ပါ။ app မှထုတ်လုပ်သောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်။ connect ကိုနှိပ်ပါ။ ယောက်ျားများ၊ မင်းရဲ့စကားဝှက်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာတစ်နေရာရာမှာသိမ်းထားပါ။
သင်၏ AOL စကားဝှက်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းထုတ်လုပ်ထားသည့်စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင် Outlook အမှားပေါ်လာသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေပါက။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးမှအလုပ်မလုပ်သော်လည်းထုတ်လုပ်ထားသော app စကားဝှက်သည်အလုပ်လုပ်သင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
အကြောင်းပြချက်မှာ hard drive ရှိအချို့သောအချက်အလက်များပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ အကယ်၍ သင့်တွင်ထိုကဲ့သို့သောပြသနာရှိပါကသင်သည် POP (သို့) IMAP အကောင့်ဆက်တင်များအသုံးပြုနေသောအကောင့်ချိန်ညှိချက်များကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပြီးမှန်ကန်သောအချက်အလက်များကိုလည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ပြီးသင် IMAP ကိုအသုံးပြုနေပါက IMAP ကို ​​POP သို့ပြောင်းပါ။
သင် POP ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့သုံးရမည်နည်း။ POP ကို ​​IMAP သို့ပြောင်းပါ။ ဒါလုပ်ကြည့်ရအောင်။
POP ကို ​​IMAP ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါ Change Account Settings ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီနေရာမှာ Back ကိုနှိပ်ပါ။ Set Up My Account ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ connection button ကိုမတွေ့ရသေးပါကသင်သွားလိုသောအကောင့်ကိုသာရွေး။ သင်ဆက်သွယ်လိုသောအကောင့်ကိုပြန်ရွေးပါ။ ချိတ်ဆက်သောအခါဤအချိန် IMAP ကိုရွေးပါ။ ဒီနေရာတွင်သင်၏ပထမဆုံး AOL အကောင့်စကားဝှက်ကိုအရင်ဖြည့်ရမည်။
Connect ကိုနှိပ်ပါ။ Change Account Settings ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ဤစာမျက်နှာသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် IMAP အကောင့်ဆက်တင်များ POP ရှိ port 993 တွင် 995 SSL or TLS encryption method ရှိသည်။ မှန်ကန်သော port လည်းမှန်ကန်သည်။ ဤနေရာတွင် encryption method သည်မှန်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်အချက်အလက်အားလုံးသည်အလိုအလျောက်မှန်ကန်သည်။ သတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏ကိစ္စတွင်မမှန်ကန်ပါကသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့နောက်“ Next” ကိုနှိပ်ပါ။ ဤတွင်သင်၏ထုတ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုဤတွင်ထည့်ပါ။ Connect ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုသင်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ထည့်သွင်းလိုပါက၊ အီးမေးလ်များပိုများရင် 'Done' ကိုနှိပ်ပါ။ Send or Reception သို့သွားပါ၊ Send သို့မဟုတ် Receive All Folders ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်စောင့်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၏ထင်မြင်ချက်များကဏ္inတွင်သင်မေးလိုသည့်မေးခွန်းများရှိပါက၎င်းသည်လာနေပြီ၊ သင်အီးမေးလ်များကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသည်၊ လူများဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့၏မေးခွန်းကိုချက်ချင်းဖြေပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အဖြေတစ်ခုရှာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်စာရင်းနှင့်ဆောင်းပါးကဲ့သို့နှစ်သက်ပါ။
AOL System Mechanic ကကောင်းလား။
အဓိကအချက်။ Ioloစနစ်စက်ပြင်အကောင်းဆုံး PC tune-up Utilities များအနက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်မြဲခဲ့သည်။ Hard drive ကို defrag လုပ်ရန် suite ၏ကိရိယာများစွာသည်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာတူးကြသည်။ပြုပြင်Registry ကိုလုပ်ပြီးအခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါ။ PCMag အယ်ဒီတာများရွေးချယ်ပါပြန်လည်သုံးသပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းများလွတ်လပ်စွာ။
♪ (ပန့်ခ်ရော့ခ်ဂီတ) ♪ - (Finebros) အိုကေဒါကြောင့်ဒီဇာတ်လမ်းအတွက်ဆောင်းပါးတခုကိုမင်းတို့တုန့်ပြန်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ - ငါကြောက်တယ်။ (Finebros) t မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာပဲ။ Dell တစ်ခုပါ
အဆိုတော်မဟုတ်ပေမယ့် A Dell - စာကြည့်တိုက်အဟောင်းတွေမှာတွေ့ရတာကသူတို့ကို floppy disk တွေထည့်ထားတာလား။ - မော်နီတာသည်အမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာထက် ပို၍ ကြီးသည်ဟူသောအချက်ကများစွာပြောပါသည် - ကျွန်ုပ်သည်ဤနှစ်သည်မည်သည့်နှစ်ကမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မမွေးဖွားမီကပင်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည် - ကျွန်ုပ်တို့၌ဤကဲ့သို့သောအချိန်တိုလေးတစ်ခုရှိခဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့နောက်ဆုံးမှာအဆင့်မြှင့်တင်ထားတာပေါ့ - အိုကေ၊ အရင်တုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကွန်ပျူတာလို? - (Finebros) ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သောကွန်ပျူတာသည်ဤအခန်းအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ (ရယ်သံများ) - အိုကေ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာလိုပါပဲ။ ♪ (ပန့်ခ်ရော့ခ်ဂီတ) ♪ - (Finebros) ထို့ကြောင့်ရှေ့သို့ သွား၍ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ - အိုကေ၊ ခဏကြာပြီ - ငါဒီမှာခလုတ်ကြီးကြီးဖြင့်သွားမည်။
ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ ထပ်? အိုးငါမကိုင်ဖို့ရှိသည်! စောင့်ကြည့်နေတဲ့ခဏစောင့်ပါ။ ဒါက Monitor ပါ။ နံပါတ်
အဟ ... - ငါမှန်တယ်လို့ထင်လား - (Finebros) ဒါကမော်နီတာပဲ။ - အိုးရိုက်။ (ကွန်ပျူတာတက်သည်) - (အောင်ပွဲခံ) Ooh! (ရယ်သံများ) ငါ့အဖေကငါ့ကိုအရမ်းဂုဏ်ယူလိမ့်မယ်။ ဒီမှာတန်ခိုးပါ။ (ကွန်ပြူတာဖွင့်နေပြီ) အိုကေ။
ငါသိတဲ့အတိုင်းပဲ (Computer ကကျယ်လောင်လွန်းတယ်) - အသံကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါ့ဘဝမှာဒီဆူညံသံတွေကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးကြားဖူးတာကြားဖူးတယ်မထင်ဘူး။ (Computer beep) - အများကြီးပိုကျယ်တယ်။
အများကြီးပိုပြီး beep ။ (Computer hums) - အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါ။ ♪ (Humming Jeopardy အဓိကသီချင်း) ♪ - အချိန်ယူရ ဦး မည်။ - များသောအားဖြင့်သင် boot တက်လျှင် snack ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်၏ snack အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်ဒီမှာလာပြီး boot လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည်။ - Windows 95. အိုကေ၊ ငါ့အချိန်နည်းနည်းစော။ - သမိုင်းမတင်မီ! (Finebros chuckles) ဒါဟာတကယ်ပဲ။
ဒါကဒိုင်နိုဆောဟောင်း - အိုး! အိုး Okay.- (Finebros) ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒီ operating system ဟာ desktop ကွန်ပျူတာရဲ့မျက်နှာကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ဒါက Windows 95 လား။ - Wow.- 95, 1995 လို? - (Finebros) ၀ င်းဒိုး ၉၅ ရဲ့ကြားသိရလား။ - ဆိုလိုတာကငါတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့အကြောင်းကြားဖူးတယ်။ (Chuckles) အင်တာနက်ပေါ်မှာ 'Ha, ha' လိုအရာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ Windows 95 ကနို့စို့နေတယ်။ ဒါကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်ရေးစနစ်ရှိဖို့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမြေပုံပေါ်မှာမင်းကိုတကယ်ပဲရောက်သွားစေတယ်။ - နည်းပညာကိုသိသောသူတို့သည်လက်ရှိထက် ကျော်လွန်၍ တစ်ခုခုသိသင့်သည်။
မင်းအရင်အတိတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (Finebros) ကိုသိဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ယေဘူယျအားဖြင့်ဘာထူးခြားသလဲ။ - (chuckles) ပြTheနာကဘယ်မှာစရမလဲ။ - (ရယ်သံများ) အရာရာတိုင်းဟာပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ - ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ် Windows operating systems များနှင့်တော်တော်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပေ။ - ဒါဟာပိုဆိုးပုံရတယ် အနားအနားမှာထက်မြက်တယ်။
ဒါဟာအနည်းငယ်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောပါပဲ - အရမ်းလံတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Internet Explorer, Inbox နဲ့အခြားအရာအားလုံးဘာမှမဖြစ်ပျက်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်အခြေခံအရာများ။ - (Finebros) ကောင်းပြီ၊ ဒါ့ကြောင့်သင့်ကို Windows 95 အချို့မှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်သွားမှာပါ။ ကောင်းပြီ - (Finebros) ဒါကြောင့်လျှောက်လွှာများကိုကြည့်ပါ။
ဒါတွေထဲကတစ်ခုခုကိုသင်သိသလား - အမှိုက်ပုံး (ရယ်) ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၊ - အိုကေ, ငါအမှိုက်ကိုငါသိ၏။ ငါ Internet Explorer ကိုသိတယ် - ကြောက်လန့်နေသော Internet Explorer (ရယ်သံများ) အခုထိငါတို့ထင်တာထက်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ (Finebros) ဒါဆိုဆယ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ browser ကိုဖြတ်ပြီးအွန်လိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်။ - ငါတို့အွန်လိုင်းနှင့်သွားလို့ရလား ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ (mouse ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ) - 'Internet Explorer ကအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ' - အိုး၊ ဒီကိုငါပြင်ရမယ်၊ စောင့်ရ ဦး မယ်၊ EDI လား။ ? - (Finebros) Windows 95 တွင် WiFi မရှိသောကြောင့်အင်တာနက်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Internet Explorer ဘာလို့ရှိရတာလဲ။ ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ WiFi မရှိတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲ။ - အိုကေ၊ အွန်လိုင်းဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ - ၀ င်ရောက်ပါ၊ ချိတ်ဆက်ပါ။ - အင်တာနက်ကိုသုံးရန်သင်၏ modem နှင့်ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ - ငါ့ကို ... တစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်း, modem ကဘာလဲ? - (Finebros) modem ဆိုသည်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဒေတာပေးပို့ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောကိရိယာဖြစ်သည်။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ modem တွေအနေနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေသုံးပြီးဒီဟာကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ - ဒါဆိုမင်းအင်တာနက်ကိုသုံးရန်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသုံးရမည်လော။ - အိုး, ဒီအသံကျယ် (screeching) သည်မဟုတ်လော Wi-Fi သည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုစဉ်းစားခြင်းသည်ကြောက်စရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တစ်နေရာရာသို့ သွား၍ wi-fi မရှိလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ (Finebros) ကောင်းပြီ၊ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်နောက်တစ်နည်းမှာကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော AOL ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဖွင့်လှစ်။ - ငါအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတယ်။ - ငါသော့၊ 'ကောင်းချီး' နှင့်ကမ္ဘာ၊ ထို့နောက် Illuminati သင်္ကေတကိုတွေ့သည်။ - ဒီတော့ပထမအဆင့်ပါ၊ - ဤအချိန်တွင်သင်၏ဒုတိယအစာရေရှည်ရှည်လျားနေသည် - 'ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုကိုစနစ်တကျအစပျိုးခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ' မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား?! - ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ဆောင်နေကြပြီ။ အဆင့်တစ်ဆင့်သို့ပြန်လှည့်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်၊ မြည်း။ (ရယ်သံများ) ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။ အိုးသွားကြကုန်အံ့။
အိုးမသွားဘူး ... 'ကျွန်ုပ်၏ modem ကို အစပြု၍ မရပါ' - (Finebros) ၀ င်းဒိုး ၉၅ နှင့်ပါ ၀ င်သည့်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ start ခလုတ်ဖြစ်သည်။ - အင်းဒါအရူးပဲ
ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့သေးငယ်တဲ့အရာဟာ ၂၀၁၆ မှာရှိနေတုန်းပဲလို့ခင်ဗျားဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး။ (Finebros) Windows 95 မတိုင်မီမှာကွန်ပျူတာတော်တော်များများဟာအဲဒီလိုမျိုးသွားစရာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ ကွန်ပြူတာတောင်သုံးလို့ရလား။ - သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အမှုအရာသွားလာမလဲ - သူတို့မှာရှာဖွေရေးခလုတ်တစ်ခုရှိလား။ ထိုအခါသင်သည်အချို့သောကုဒ်သွင်းထား? - (Finebros) အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံမှာ DOS ဟုခေါ်သည်။ - DOS? - DOS! အိုးငါကြားသိ! - (Finebros) DOS အောက်တွင်သင်ပရိုဂရမ်တစ်ခု run ရန် (သို့) ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကွန်ပျူတာကုဒ်ကိုအမှန်ပင်ရေးထည့်ရမည်။ - အိုး! ဒါကဒီလိုမျိုးခွေးပဲ။ - အင်း၊ ဒါကလွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသိပ်ကိုအေးဆေးနေပုံရတယ်၊ လူတွေ - သူတို့ကွန်ပျူတာမရခင်ကွန်ပျူတာကုဒ်ကိုလေ့လာခဲ့ကြတာပါ။
ဒါကသော်လည်းအလုပ်လွန်းအလုပ်နဲ့တူပုံရသည်! - သင်အိုင်ပက်ဒ်တွင်ရှိနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပ်များသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုသောအခါတိုင်းကုဒ်အနည်းငယ်ကိုထည့်ရမည်။ ငါကလူနည်းနည်းကသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ XYZ ဖိုင် ၁၀၂ ကိုရှာပါ။ 'သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု။
ဒါကမှန်တယ်၊ ကွန်ပြူတာကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ (Finebros) Windows 95 ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရမ်းလူကြိုက်များခဲ့တယ်။ ပထမသုံးပတ်အတွင်း Wow! အုပ်ရေခုနစ်သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ - တကယ်လား? ခုနစ်သန်း? - ငါမအံ့သြဘူး။ Bill Gates သည် software ၏ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဤအရာကိုဖန်တီးပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာစကြာ ၀ universeာတစ်ခုလုံးအထိကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိခဲ့သည်။ (Finebros) Windows 95 ကို install လုပ်ရန် floppy disk ၁၃ ခုသာလိုအပ်သည်။
ဝိုး! ဒါကပြင်းထန်တယ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ shit၊ အချိန်ယူရတယ်၊ floppy disk ဆိုတာဘာလဲ။ ဒါကနှစ်ထပ်ကိန်းပဲမဟုတ်လား။ - ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်နာရီပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။ (Finebros) ၎င်းသည်ယခုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တူသလော။ - မဟုတ်ပါ (chuckles) မဟုတ်ပါ၊ များသောအားဖြင့်သင်သည် wi-fi နှင့်သာဆက်သွယ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်၏ X-box ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သွင်းသောအခါ ၂ နာရီခန့်ကြာပါသည်။ ငါ့ Fallout4ကို download လုပ်ဖို့စောင့်နေပြီး 'ငါဒီကိုဆော့နိုင်သလား' (စားပွဲကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာထိပုတ်ပါ) - ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကို update လုပ်ရန်၊ အနည်းငယ် update လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏လုံခြုံရေးကိုရယူရန်လိုအပ်သည့်အချိန် - ၅ မိနစ်ကျော်ကြာလျှင်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပျက်ရသည့်အခါ - ဝမ်းနည်းပါသည်။ - (Finebros) ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Windows 95 ၏နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ - အိုးမိုက်တယ်! Happy Birthday.- (Finebros) ယနေ့သင်နှင့်အတူကြီးပြင်း။ အသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းပညာအားလုံးဖြင့်အရာဝတ္ထုမည်မျှဝေးဝေးရောက်ရှိနေပြီ၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့မဟုတ်သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်ထိုင်နေစဉ်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိပါသလား။ သဘာဝကျကျနဲ့တူပါစေ။
လူတိုင်းအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးလား။ လူတိုင်းအချိန်ယူပြီး 'အင်း၊ ဒါအရမ်းကိုလွယ်တယ်' လို့ပဲမတွေးပါနဲ့ - ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းကပိုပြီးအင်အားကြီးတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတာကရူးသွပ်တယ် - သက်ကြီးရွယ်အိုတော်တော်များများကဒီဆောင်းပါးကိုကြည့်ပြီး 'အိုး၊ ဒါကိုစစ်ဆေးပါ' ထွက် Windows 95 ဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့သူတို့ဟာဒီနေ့ခေတ်မှာနည်းပညာကျွမ်းကျင်ပြီးအရမ်းညစ်ပတ်တယ်။ 'အင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး ငါ့အမှားငါနောက်မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သင်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါကွန်ပျူတာအဟောင်းများတွင်ဤတုံ့ပြန်မှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ (Finebros) ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးပိတ်ပါ - စောင့်ပါ။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှိသေးသည်။ - ဆူညံသံကိုဖြစ်စေမလား။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုယခုပိတ်ထားရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါကကိုယ်ထိလက်ရောက်ပိတ်ထားရန်ရှိသနည်း - 'သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုယခုပိတ်ထားနိုင်ပြီ။ ' မဟုတ်ပါ - (ရယ်သံများ) 'ငါ့ကိုပိတ်ထားပြီအခုတော့လုံခြုံပြီ' ငါ့ကိုတကယ်ကြောက်တယ် (ခလုတ်နှိပ်ခြင်း) - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤအဆင့်မပါဘဲလုပ်ရန်ကြိုးစားလျှင်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မလာမီ၎င်းကိုလုံခြုံမှုမရှိသည့်အချိန်တွင်ပိတ်ထားခြင်းသည်လုံခြုံသည်ဟုကျွန်ုပ်အားအဘယ်ကြောင့်ပြောရမည်နည်း။ ပေါက်ကွဲမလား (Computer ကိုပိတ်ထားသည်) (Finebros chuckles) - WIN! - ဤဆယ်ကျော်သက် React ၏ဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ - Subscribe ။
အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါကတိပေးတယ်။ ဟေး၊ ငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အခုဒီဆောင်းပါးကိုပိတ်လိုက်ပြီ
AOL၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်အင်တာနက်၏အစောပိုင်းရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဝက်ဘ်တွင်အသိအမှတ်ပြုဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မူလက၎င်းသည်အမေရိကန်သန်းပေါင်းများစွာကို dial-up service တစ်ခုပေးခဲ့ပြီး Netscape ကို ၀ ယ်ပြီးနောက်ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်၊ အီးမေးလ်၊ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် web browser တစ်ခုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ကြိုဆိုပါတယ် သင့်မှာမေးလ်ရှိတယ်! ငါသတိထားမိတယ် ဒါအားလုံး AOL ပဲ
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏အသံများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပါက dial-up internet နှင့် AIM messaging system ကိုအသုံးပြုသော AOL ၏သန်း ၂၀ နှင့်အထက်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ AOL အသုံးပြုသူအမည်ကဘာလဲ။ Bsquad.Bsquad? ကျွန်ုပ်၏ AIM မျက်နှာပြင်အမည်များမှာ Bugsthatboy နှင့် TraineeboyC တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ AOL အမည်မှာသရော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ AOL ကို ၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကမီဒီယာတို့၏ဘုရင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့ခဲ့သဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် Tom Hanks နှင့် Meg Ryan တို့သရုပ်ဆောင်ထားသော 'You GotMail' ဟာသ 'You GotMail' တွင်အဓိကဇာတ်ကွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်တယ် ငါအွန်လိုင်းသွားတယ် ကြိုဆိုပါတယ်
စကားလုံးသုံးလုံးမကြားမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အသက်ရှူသည်။ မင်းမှာစာရှိတယ်။ ၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာလတွင်အမြင့်ဆုံးအဖြစ် AOL တွင်ဒေါ်လာ ၂၂၂ ဘီလီယံပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် Broadband အင်တာနက် ၀ င်ရောက်လာခြင်းနှင့် dot-com ပူဖောင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းကယခင်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးကို၎င်း၏ယခင်အရိပ်အယောင်အဖြစ်သို့လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် AOL ကိုကြည့်ရှုရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူအများစုအတွက်အင်တာနက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပြီး၊ လူအများအပြားကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီပေးခဲ့သည့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းကအဓိကကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်၎င်းသည်ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ AOL ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲဆောင်းပါးဂိမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကကုမ္ပဏီအား Control Video Corporation ဟုခေါ်သည်။ ဆောင်းပါးဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်ဂိမ်းကစားသူများသည်သူတို့၏ Atari 2600 ဂိမ်းစက်ကို၎င်းတို့၏ဖုန်းလိုင်းထဲထည့်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဂိမ်း၊ သတင်း၊ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်များကိုလက်လှမ်းမီသော QuantumComputer ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အလွန်အောင်မြင်မှုမရှိသောကြောင့်မကြာမီတွင်ပြန်လည်မွေးဖွားလာသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ America Online ကိုတရားဝင် AOL ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်း၊ စတင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အင်တာနက်ကိုဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် AOL ကိုစတင်ခဲ့ပြီးလူအနည်းငယ်သာအွန်လိုင်းရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာတောင်မှပီစီတွေမှာ modem တွေတောင်မှမရှိကြဘူး။
ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူအများစုကလူတွေကအွန်လိုင်းမှာဖြစ်ချင်တယ်လို့မထင်ကြဘူး။ ထိုအခါဆာဗာထိုအချိန်ကရောက်ရှိရန်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကတကယ့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်။
ဒါကြောင့် AOL ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော၊ ဂရပ်ဖစ်အသုံးပြုနည်းကိုသင်မည်သို့ဖန်တီးသနည်း။ CEO ဖြစ်သူ Steve Case ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် NT ကိုလူသိရှင်ကြားရောင်းပေးခဲ့သည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစတင်ကာ AOL သည် floppy disk များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စီဒီများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဝဲလ်များနှင့်နာရီအနည်းငယ်သာရှိသောအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သောသုံးစွဲသူများကိုစာပို့ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ရန်လိုသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါ AOL အကြောင်းစဉ်းစားသောအခါငါသူတို့ AOL တွင်စာရင်းသွင်းရန်သူတို့တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်အားစာပို့မည့်သတ္တုသံဘူးများကိုစဉ်းစားသည်။ ငါဖြစ်ကောင်းသူတို့ထဲကတရာရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကလစဉ်လတိုင်းရောက်လာတယ်။ ကင်ပိန်းတွင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ AOL ၏သုံးစွဲသူများသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀,၀၀၀ အောက်မှ ၂၅ သန်းအထိတိုးများလာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် AOL ကပိုမိုကြီးမားလာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကိုပထမဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ပေါင်းစည်းကြောင်းကြေငြာခြင်းဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဤတွင်ရောက်ရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ ဒေါ်လာ ၁၆၀ ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျပြီး AOL Time Warner မှဒေါ်လာ ၁၆၀ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီးသမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဲဒီအချိန်တုန်းကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲ။ AOL ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် broadband အတွက်လမ်းကြောင်းလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
Time Warner သည်အကြီးဆုံးသောကေဘယ်ကြိုးစက်များဖြစ်ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာဖြစ်သော CNN နှင့် HBO စသည်ဖြင့်ပြည်ပရှိတိတ်ခွေကမ္ဘာတွင်တန်ဖိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့ကြသည်။ Time Warner ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အလွန်အားကောင်းသောမီဒီယာကုမ္ပဏီများရှိသော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတ်အတွက်အမှန်တကယ်လမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါ။ ဒီတော့ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကငါတို့အမြင်မှာအနိုင်ရတဲ့ပေါင်းစပ်မှုပဲ။
ဒါပေမယ့်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမသွားခဲ့ပါဘူး အစကတည်းကပင်ပေါင်းစည်းထားသောကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏မြင့်မားသောဘဏ္expectationsာရေးမျှော်လင့်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပေ။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနည်းပညာစတော့များသည်အင်တာနက်ပူဖောင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရုတ်တရက်ကျဆုံးသွားသည်။
ထိုအချိန်က AOL ၏စီးပွားရေးမှာ dial-up အင်တာနက်နှင့်ကြော်ငြာဝင်ငွေများဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ သို့မဟုတ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် dot-com ပူဖောင်းပြိုကျသောအခါ AOL ပိုက်ဆံပေးသောထိုကုမ္ပဏီများအားလုံးဒေဝါလီခံကြရသည်သို့မဟုတ် A ဝေးပြန်သွားကြပြီး AOL ကိုထိုငွေကို ပြန်၍ မပေးနိုင်တော့ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကြော်ငြာဝင်ငွေကအရမ်းမြန်သွားတယ်။
AOL ၏နိဂုံးအဆင့်။ အဆင့်နှစ်ရောင်းအားဘက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ AOL Time Warner နှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းပြီးနောက်မကြာမီလူများသည်ကေဘယ်လ်ဘရော့ဘန်းသို့စတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး AOL Time Warner က ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၉၈ ဘီလီယံအရှုံးပေါ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ကော်ပိုရိတ်သမိုင်းတွင်နှစ်စဉ်အသားတင်အရှုံးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်စီးပွားရေးဖိအားအသစ်များကြောင့် AOL နှင့် Time Warner ၀ န်ထမ်းများအကြားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Time Warner မှာဒစ်ဂျစ်တယ် Path ကိုစိတ်မ ၀ င်စားသူ၊ အင်တာနက်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားသူ၊ သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုလူသိများအောင်လုပ်ပေးနိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ကာကွယ်ရေးကိုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Kulturkampf သည်ရိုးရာမီဒီယာဟုခေါ်သည့်အင်တာနက်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများစွာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဒီတော့ AOL မှာ၊ ဒါက Facebook ရဲ့စကားပြေစကားလုံးပဲ၊ မြန်တယ်၊ လူငယ်များသည် Time Inc. ကိုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းတို့သည်အရာရာကိုဖျက်ဆီးရန်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မပါဝင်သော Time Warner site ကိုရွံရှာသည်။
သင်ဟာစာနယ်ဇင်းပညာနှင့်လှုပ်ရှားမှုအချို့အတွက်စံပြသဖွယ်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတယ်။ အင်တာနက်ပူဖောင်းပေါက်ကွဲသည့်အချိန်တွင် AOL ၏စီးပွားရေးပုံစံနှင့်အတွေးအမြင်ကိုသံသယဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တည်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်များစွာကျဆင်းသွားခဲ့သော Time Warner သည်ယခုအခါသူတို့၏ ၀ ယ်သူကိုကြည့်ပြီး“ မင်းကိုငါတို့မယုံနိုင်ဘူး။
ဒါကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး မင်းကိုတကယ်ယုံဖို့လိုတယ် သို့သော်ထိုအချိန်က Time Warners Entertainment နှင့် NetworksGroup ၏ဥက္ကwas္ဌဖြစ်သူ Jeff Bewkes က AOL ၏ပြproblemsနာများသည်ယဉ်ကျေးမှုစစ်ပွဲမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုသည်။
ငါ AOL ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများသည် Time Warner ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းသဘောမတူပါ။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကိုစဉ်းစားပြီးဖုန်း modem ကိုကျဉ်းမြောင်းသော modem သို့ချိတ်ဆက်ပြီးသင်၏အိမ်တွင် AOL ဆာဗာနှင့် ၅ နာရီချိတ်ထားသည်။ အခကြေးငွေမပေးပါ
သင် AOL အနေဖြင့်သင်ဒေသခံတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်သဘောတူညီမှုမရှိပါ။ ဒါကထူးခြားတဲ့အချိန်နှင့်အခွအေနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစု၏ပထမဆယ်စုနှစ်တွင်အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အပြိုင်အဆိုင်စတင်ခဲ့ပြီးလူများသည်ဘရော့ဘန်းကိုအသုံးပြုလိုကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်သည် AOL ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်သူတို့၏ bandwidth ကိုအသုံးပြုလျှင်၊ သင် AOL ဖြစ်လျှင် broadband ပံ့ပိုးသူနှင့်သဘောတူညီချက်ယူရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ စီးပွားရေးပြissuesနာများအပြင် AOL သည် Time Warner Inc. မှအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော America Online ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကော်ပိုရေးရှင်းလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်အဓိကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူအငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗာဂျီးနီးယားအရှေ့ပိုင်းတွင်အစိုးရတွင် AOL ရှိသည်။ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကူညီခြင်းနှင့် abetting နှင့်အတူတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ပြီးတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ AOL ဟာအပြိုင်အဆိုင်ကြီးကြီးမားမားဆက်လုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ပုံမှန် 113 ည့်သည်ပေါင်း ၁၁၃ သန်းဖြင့် AOL သည် Y. ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပရိသတ်နှင့်ကျော်ကြားသည်။
သို့သော် AOL ၏ ၁၈ သန်းခန့်သောပေးဆောင်ရသည့်သုံးစွဲသူများသည်မြန်ဆန်သောမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်၎င်းတို့၏နှေးကွေးသော dial-up အကောင့်များကိုစွန့်လွှတ်ကာဂူဂဲလ်နှင့် MSN ကဲ့သို့ပြိုင်ဘက်များမှအခမဲ့အီးမေးလ်၊ ထိုအချိန်က Jon Miller သည် AOL ကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် Time Warner ၏ထောက်ပံ့မှုရှိခဲ့လျှင်ကုမ္ပဏီသည်လုံးဝကွဲပြားသော ဦး တည်ချက်ရှိနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ YouTube ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ချင်ဘူး
Yahoo သည် QQ ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ယခုအခါအာရှရှိကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည့် Tencent နှင့် Yahoo တို့ထိမိသောအခါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။ ဒီလှည့်ကွက်များနှင့်အလှည့်အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒါကိုထောက်ခံမှုမရခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Time Warner သည် AOL ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ပြင်ပ AOL ၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ထိုအချိန်ကဒေါ်လာ ၃.၄၄ ဘီလီယံသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် AOL သည် Google အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Tim Armstrong ကိုကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုအသစ်အဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့သည်။
AOL ကိုယူပြီး Time Warner ကိုချွတ်လိုက်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်ဆောင်စရာများစွာရှိခဲ့သည်။ နံပါတ်တစ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာသုညကနေဒေါ်လာ ၁၅၀ ဘီလီယံအထိဂူးဂဲလ်ကုမ္ပဏီကိုသွားပြီး AOL ကိုဒေါ်လာ ၁၅၀ ဘီလီယံကနေ ၁ ဘီလီယံအထိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုတကယ်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်။
ငါဝန်ထမ်းအခြေစိုက်စခန်းတ ဦး တည်းအရာလိုအပ်ပါတယ်ထင်နှင့်ထိုမဟာဗျူဟာကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ငါတို့သွားရာအရပ်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ နံပါတ်နှစ်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟာဗျူဟာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသွားနေတဲ့နေရာအတွက်ဗျူဟာရှိဖို့လိုတယ်။ အကြောင်းအရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေတည်ဆောက်ဖို့ပါ။
ဒါဟာအစီအစဉ်ကြော်ငြာအကြောင်းပါ။ ပြီးတော့ AOL ကိုလူအများစိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာမှာပိုကြီးပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာအောင်ကူညီဖို့စီးပွားရေးအသစ်မှာဒေတာတွေကိုဆီအဖြစ်သုံးတာပါပဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Verizon က AOL ကိုဒေါ်လာ ၄.၄ ဘီလီယံဖြင့် ၀ ယ်ယူမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Verizon ကို AOL ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိုဘိုင်းလုပ်ငန်းမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိတယ်။ နံပါတ်နှစ်ဆိုတာကနေ့စွဲတွေတကယ်အရေးပါခဲ့ပါတယ်၊ ငါဟာဒီခေါင်းစဉ်အချို့နဲ့ဆလိုက် tour ည့်သည်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒေတာကမိုဘိုင်းဒေတာလိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးအသစ်ရဲ့ရေနံဖြစ်တယ်လို့အမြဲပြောတယ်။
တတိယကတော့အကြောင်းအရာကိုငွေသုံးရတယ်။ Netflix နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါဝင်မှုများရှိသော်လည်းအကြောင်းအရာအတွက်စစ်ပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်အရင်းအနှီးများစွာလိုအပ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထိုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်လိုခြင်းမရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်း။ နှင့်ဆောင်းပါးအာကာသကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ရဖို့။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဖက်တွေအကြောင်းစစဉ်းစားလာတယ်။ Verizon ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးမှာတွေ့ခဲ့သမျှအရေးကြီးဆုံးပြthreeနာသုံးခုမှငါးခုအတွက်သဘာဝအဖြေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Verizon သည် Yahoo ကို ၀ ယ်ယူပြီး AOL နှင့် Yahoo ကို Oath ဟုခေါ်သောဌာနတစ်ခုသို့ပေါင်းခဲ့သည်။ Yahoo သဘောတူညီမှုသည် Verizon အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Verizon သည် AOL နှင့် Yahoo တို့အကြားတစ်ကြိမ်သာဝင်ငွေရရှိသောသုံးစွဲသူတစ်ဘီလီယံခန့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ 2019 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ Oath မှာငါတို့စုစည်းထားတဲ့ Verizon media property တွေကစတုတ္ထအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီဂျစ်တယ်အိမ်ခြံမြေမရှိဘူး။ AOL Time Warner ကဲ့သို့ပင် Oath သည်အလွန်မြင့်မားသောအရောင်းခန့်မှန်းချက်များရရှိခဲ့သည်။
ငါတို့ကုမ္ပဏီတွေကိုအတူတကွပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတွေဟာဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံရောင်းအားရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံရတယ်၊ မင်းသာစက်မှုလုပ်ငန်းမှာပုံမှန်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုသာယူမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲ။ Verizon ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီနောက်မှာထားနိုင်ရင်ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံရှိမယ်ထင်တယ်။
သို့သော် Oath သည်စိတ်ပျက်ပြီး ၀ င်ငွေဘီလီယံ ၂၀ နီးပါးမရောက်ရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Verizon ကဒေါ်လာ ၄.၆ ဘီလီယံလျှော့ချမည်ဟု Oath ကကြေငြာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Verizon သည်ကုမ္ပဏီသည်မူလမျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့တန်ဖိုးရှိမည်ဟုမယုံကြည်တော့ပါ။
မကြာမီတွင် Verizon သည် Oath အမှတ်တံဆိပ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားသတ်ပစ်လိုက်ပြီး Yahoo နှင့် AOL Verizon Media ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ AOL အတွက်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အိပ်မက်မှာ AOL သည်အင်တာနက်ရှုခင်း၏အဓိကနေရာတွင်ရှိနေသည်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအရာတွေတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားပေမဲ့ AOL တံဆိပ်ဟာဒီခေတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲမှာလူသားတွေအကြားဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအပြောင်းအလဲအများဆုံးသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ငါ AOL ဟာသမိုင်းမှာအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပြီးသွားပြီ၊ ပြီးပြီ၊ ပြီးတော့နေဝင်ချိန်ကိုစီးသွားတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သမိုင်းမှာဆင်းသွားမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါထင်တာကတော့ဒီနေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အချက်အလက်လို့ထင်တယ်။ တချို့ကအလိုတော်နှင့်များစွာသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မင်းဆီကိုသွားပါAOLငါ့အကောင့် myaccount မှာ။နေ.with ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ tab သို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ကိုနှိပ်ပါစနစ်စက်ပြင်/ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် 2019
AOL IMAP အကြောင်းသင်ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲ။
Jonathan Fisher သည် CompTIA အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောနည်းပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ၆ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီး TechNorms နှင့် Help Desk Geek ကဲ့သို့စာပေများအတွက်ရေးသားခဲ့သည်။ Yahoo! စာပို့ဘာကြောင့် IMAP? သင်၏ AOL မေးလ်ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သောအီးမေးလ်ဂလိုင်းသို့မဟုတ်အက်ပ်တွင်မဆို AOL မေးလ်နှင့်သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါ။
အကယ်၍ သင်၏ AOL မေးလ်ဆက်တင်ကိုသာကျန်အချက်အလက်များကိုမလိုအပ်ပါကသင်သွားပါ။ ဤတွင် AOL မေးလ်အတွက် SMTP နှင့် POP / IMAP ဆက်တင်များဖြစ်သည် - 1. AOL SMTP ဆက်တင်များ SMTP ဆာဗာအမည် - smtp.aol.com SMTP Username - သင်၏ AOL အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုလုံး (“ @ aol.com အပါအဝင်”) ၂ ။ AOL ဆာဗာအမည် - pop.aol.com ၃ ။
AOL ဆာဗာအမည်: smtp.aol.com SMTP Username - သင်၏ @ AOL အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုလုံး (“ @ aol.com”) သင် Mac သို့မဟုတ် Windows 10 မေးလ်အက်ပလီကေးရှင်း၊ Apple iPhone သို့မဟုတ် Android မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအတွက်သင်၏ AOL အီးမေးလ်ကိုသတ်မှတ်ရန်တူညီသောအထွက်ဆာဗာအီးမေးလ်ဆက်တင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် web browser တစ်ခု
ကျွန်ုပ်၏ AOL အီးမေးလ်အကောင့်ကိုမည်သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။
သင်၏ AOL မေးလ်ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သောအီးမေးလ်ဂလိုင်းသို့မဟုတ်အက်ပ်တွင်မဆို AOL မေးလ်နှင့်သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါ။ Outlook, Mac Mail, Windows 10 Mail, Thunderbird, Incredimail သို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်သောပံ့ပိုးသူအတွက်အီးမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းရှိ AOL မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖိုလ်ဒါများကို AOL Mail IMAP ဆာဗာချိန်ညှိချက်များကိုထည့်သွင်းပါ။